Klowledge – Banglarchok News Portal
.ခွေးကိုက်ခံရပါ က ၊ ခွေးရူးပြန်ရော ဂါ ၊ မဖြစ်စေ ရန် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ…!
၁။ ဒဏ်ရာ ကို ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် အနည်းဆုံး (၁၅) မိနစ် ဆေးကြပါ။ ၂။ အနာကို အရက်ပြန် (သို့) ဘီတာဒင်းကဲ့သို့သော ပိုးသန့်စင်ဆေးရည်ထည့်ပါ။ ၃။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါမဖြစ်စေရန် တစ်ခုတည်းသော ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းမှာ ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို အမြန်ဆုံးနှင့် အကြိမ်ပြည့် ထိုးနှံရန်။ ၄။ ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့် လက်ချောင်းထိပ်တို့တွင် အကိုက်ခံရပါက ရောဂါပိုးပျံ့နှံမှု ပိုမိုလျင်မြန်နိုင်ပါသဖြင့် အရေးပေါ် ချက်ချင်း ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ (ကာကွယ်ဆေးကို အချိန်မီထိုးနှံခြင်းဖြင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသဖြင့် နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများကို အမြန်ဆုံးသွားရောက် ကုသမှုခံယူရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။) ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဆိုသည်မှာ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားပြီး၊Continue Reading
ခလုတ်ပိတ်ထားသော်လည်း ပလပ်ဖြုတ်မထားလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ဆွဲယူသုံးစွဲနေသောပစ္စည်းများ…!
မကြာမှီ လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲခတွေလည်း မြှင့်မယ်လို့ ကြားနေရပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း လျှပ်စစ်မီးကိုလျော့သုံးဖို့ ကြိုးစားနေကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် မသုံးစွဲပဲပိတ်ထားပေမယ့်လည်း လျှပ်စစ်အားသုံးကို စွဲယူသုံးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ပြောပြ ခြင်ပါတယ်။ ၁။ ဖုန်း Charger လူတွေတော်တော်များများက ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ ခလုတ် (Charger) ကို ဖုန်းနဲ့ မသွင်းထားရင်တောင် ပလပ်ပေါက်နဲ့ ဒီအတိုင်း တပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုထားရင် ဖုန်းအားမသွင်းပဲနဲ့တောင် တစ်နေ့လုံးကို 1.2 W လောက် ကုန်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းအားသွင်းပြီးရင် charger ပါဖြုတ်ထားပါ။ ၂။ TV Tuner တီဗီရဲ့ Channel လိုင်းလေးတွေကို ရှာပေးတဲ့ Digital TV Tuner လေးတွေကိုContinue Reading
၁၀တန်းဖြေဖူးတာနဲ့ တက်လို့ရမယ့် မြန်မာ/ကိုးရီးယားမော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်တပ်ဆင်သင်တန်းကျောင်း ၁၀တန်းဖြေဖူးတာနဲ့ တက်လို့ရမယ့် မြန်မာ/ကိုးရီးယား မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်တပ်ဆင်သင်တန်းကျောင်း ကိုယ့်သားသမီး ၁၀တန်းဖြေပြီးကျတဲ့သူဘဲဖြစ်ဖြစ် အောင်တဲ့သူဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသင်တန်းတက်ခိုင်းရမလဲဆိုတာဝေ ခွဲမရဖြစ်နေရင် အကြံတစ်ခုပေးပါရစေ။ မကွေးမြို့နဲ့ ၁၀မိုင်လောက်ဘဲဝေးတဲ့ မကွေး-တောင်တွင်းလမ်းနဲ့ ၃မိုင်ကျော်ကျော်လောက်ဘဲဝေးတဲ့ မယ်လှတောင်ရွာအဝင်လမ်းအတိုင်းသွားလို့ရှိရင် အစိုးရမော်တော်ယာဉ်သင်တန်းကျောင်းကိုရောက်ပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ ကိုးရီးယားပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ဝါယာရိန်းပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်းများ တွင်ခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာများကို စာတွေ့ရောလက်တွေပါ ကွန်ပြူတာများနှင့်ပါမကျန် သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ အသုံးပြုသင်ကြားပေးတဲ့စက်ကိရိယာတွေဟာနိုင်ငံတကာအဆင့်မှီတွေချည်းပါ။ တော်တော်လေးအားရကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ မိန်းခလေးတွေပါသင်ကြားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ နေစရာအဆောင်များလည်းသီးသန့်ရှိပါတယ်။ သင်တန်းကြေးတလ စရိတ်ငြိမ်း၂၅၀၀၀ဖြစ်ပြီး စာသင်နှစ်အတိုင်း တနှစ်သင်ကြားပေးပါတယ်။ သင်တန်းပြီးဆုံးရင်လဲအလုပ်အကိုင်ပါရှာဖွေပေးနေတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများလေ့လာပြီးကိုယ့် သားသမီးတွေ ရဲ့ဘဝရှေ့ရေးအတွက် တင်ခိုင်းစေသင့်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုပါ။ ဆက်သွယ်ရန်- ၁၀တန်းဖြေဖူးသူ/၁၀တန်းအောင်ပြီး/ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ တလ၂၅၀၀၀ကျပ်လိုအပ်တဲ့ ဝတ်စုံ ဖိနပ် ဝယ်ရမယ်၁လပိုင်းမှာလျှောက်လွှာခေါ်မယ်။ ဦးအောင်ကျော်ခင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉၄၀၁၅၅၅၀၈၉Continue Reading
တချို့လူတွေ ပြောပြော နေကြတဲ့ အဆင့်အတန်းဆိုတာ ဘာလဲ? ဒီစကားကိုမြိန်ရည်ရှက်ရည် ပြောဆို တတ်ကြတဲ့ သူတွေကရော အဆင့်အတန်း ဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာနားလည်ရဲ့လား? လူတယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းကို သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု ဘွဲထူးဂုဏ်ထူးတွေ ရုပ်ရည်ချောမောလှပခြင်း နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇောမှု စတဲ့အရာတွေနဲ့ တိုင်းတာလို့ မရပါဘူး။ လူတယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို သူ့ရဲ့ လူပီသတဲ့အသိဥာဏ် သူ့ရဲ့ လူပီသတဲ့ စိတ်ဓာတ် သူ့ရဲ့ လူပီသတဲ့ လုပ်ရပ် တို့ကဘဲ ဖော်ပြ ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။ လူပီသမှုဆိုတာ ဘာလဲ? လူဆိုတာ သတ္တဝါတွေထဲမှာ ဥာဏ်ရည် အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တယ်။ ဘယ်အရာကိုလုပ်ရင်ကောင်းတယ် ဘယ်အရာကဖြင့် မလုပ်သင့်ဘူး မသင့်တော်ဘူး ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲခြားဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်Continue Reading
Computer နဲ့နေ့စဉ်ထိတွေ့နေရသူများဟာ Computer Radiation ကြောင့်အောက်ပါရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ပန်းနာ၊ မှတ်ဥာဏ်ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ ကင်ဆာ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဟော်မုန်းမညီမျှခြင်း၊ အာရုံကြောများ၊ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့မျိုးပွားနိုင်စွမ်းတို့ကို ထိခိုက်ခြင်း စသည့်ရောဂါများခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများကတော့ – ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့မှတ်ဥာဏ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ မျက်နှာနဲ့တစ်ခြားအရေပြားတို့မှာယားယံခြင်း၊နာကျင်ခြင်း၊နီရဲခြင်း၊ လည်ချောင်းနဲ့နားတို့မှာ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ယောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်း၊ ကြွက်သားနဲ့အဆစ်များနာခြင်း၊ ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာများဟာ စိတ်ဖိစီးမှု၊အလုပ်ပင်ပန်းတာနဲ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာနဲ့ဆင်တူနေပါတယ်။ Computer Radiation ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကတော့ – CPU တွေကိုအနည်းဆုံး သုံးပေ အကွာမှာထားပါ။ Laptop တွေကို ခန္တာကိုယ်ပေါ်တင်မသုံးပါနဲ့။ ကွန်ပျူတာနားမှာ ရှားစောင်းပင်များထားပေးပါ။ ပုံမှန်နားချိန်ထားပြီးသုံးပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ပန်းသီး၊မုန်လာဥနီ စတဲ့ VitaminContinue Reading
ရနွေးကြမ်းနှင့် နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ဖို့သတိပေးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး နဲ့ဂျပန်လူမျိုး တွေ ဟာ ထမင်းစားနေစဉ် မှာ ရေနွေး သောက်သုံးတဲ့အလေ့ ရှိကြပါတယ်။ရေအေး ( ရေခဲ ရေ သောက်သုံးလေ့ ) မရှိကြပါဘူး။ ခုချိန်မှာ တော့ သူတို့ ဆီက ထမင်းစား စဉ်Continue Reading